Maraykanka oo soo dhoweeyay go’aankii uu Joseph Kabilla ka gaaray doorashada Koongada Dimoqraaddiga ah. – Hiddo Radio 98.5 FM
Maraykanka oo soo dhoweeyay go’aankii uu Joseph Kabilla ka gaaray doorashada Koongada Dimoqraaddiga ah.
Dowladda Maraykanka ayaa soo dhoweysay go’aankii uu Madaxweyne Joseph Kabila ka qaatay doorashooyinka Dalka Koongada Dimoqraaddiga ah, markii uu ku dhowaaqay inuusan dib isu soo sharraxi doonin.
Safiirka Dowladda Maraykanka u fadhida Magaalada Magaalada Kinshasa ee Dalka Koongada Dimoqraaddiga ah ayaa sheegtay inay aad ula dhacsan yihiin tallaabbadan oo ay ku tilmaantay mid horumar leh, laakiin waxay shaki ka muujisay iney jirto hubanti la’aan ku aaddan tanasulaadda kapila.
“Waxaan soo dhaweyneynaa wararka sheegaya in Madaxweyne Kabila uusan isa soo sharraxi doonin mar Saddexaad, sida uu dhigayo Dastuurka Dalka,” ayay tiri Safiirka Dowladda Maraykanka u fadhiya Kinshasa , Nikki Haley.
Wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha , Emmanuel Ramazani Shadary , ayaa la sheegay inuu u sharraxan yahay tartanka doorashada 23-ka December ee Sanadkan, taasoo shaki badan ku abuurtay Dadka Isha ku haya xaaladda siyaasadeed ee Dalkaasi.
Amb; Haley, ayaa intaa ku dartay in Guddiga doorashooyinka Qaranka looga baahan yahay inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay xaqiijiyaan inay codkooda si xor iyo xalaal ah u dhiibteen Dadka reer Koongo, marka la gaaro 23-ka December, 2018-ka.
Madaxweyne Joseph Kabila, oo xilka kala wareegay Aabihii , Laurant Kabila Sanaddii 2001-dii , ayaa Laba jeer oo hore loo doortay inuu hoggaamiyo Dalka Koongada Dimoqraaddiga ah, taasoo ay ka dhalatay caro iyo mucaaradad badan.
Previous Article Duqeyn ay Israel ka fulisay Marinka Gaza oo lagu dilay Haweeney iyo Caruurteeda.
Next Article Dhulgariir labaad Oo kadhacay Lombok Indunisiya